Global Voices teny Malagasy » Sary: Fandehandehanana Any Afovoany Atsinanana · Global Voices teny Malagasy » Print
Sary: Fandehandehanana Any Afovoany Atsinanana
Voadika ny 20 Desambra 2017 19:10 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika (fr) i Claire Ulrich, miora
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Arabia Saodita, Bahrain, Ejipta, Emirà Arabo Mitambatra, Jordania, Libanona, Fampandrosoana, Hehy, Mediam-bahoaka, Sakafo, Saripika, Tontolo_iainana
Rehefa nahita ireto sary ireto  aho, dia nieritreritra : ondry=Nouvelle Zélande. Izany hadisoako ! Rehefa jerena akaiky, tsy dia tena maitso ny bozaka ary misy satrana erỳ ampara tazana. Tena akaiky be ny toerana misy ahy nòho ny noeritreretiko ity.
Atombontsika amin'i Riad, renivohitri'i Arabia Saodita, ny fitsidihantsika ireo bilaogy an-tsary ao Afovoany Atsinanana, izay ampahafantaran'i Saudi Cacher[Ang], bilaogerantsika mipetraka any Arabia Saodita, ireo tontolo manodidina, ireo fomban-drazana, ny zavaboarin'ny tany efitra any amin'ireo lohasaha nosavasavainy niaraka tamin'ireo anadahiny.
« Manodidina ny tamin'ny 8h30 (maraina), nanaraka ny fikorian'ny wadi  izahay. Iray amin'ireo wadis lehibe indrindra mikoriana ao amin'ny Tenhat eo am-pototr'ireo dongompasik'i Danà ny Ash Shawki. Tsy hay hadinoina io fitsangatsanganana io satria nandalo teo akaikinà ondrivavy sy rameva an-jatony niraoka tao amin'ilay lohasaha lonaka izahay. Indraindray, nijanona nijery ny tontolo manodidina na nandinika zavamaniry hafakely iray izahay. Te hahita holatra an'ala (faga, amin'ny teny arabo) i Abu Talal, izay maniry mandritra ny fotoana fohy anatin'ny vanimpotoan'ny orana, fa izaho sy ny rahalahiko Hamad kosa dia te hahita dahal  tsara (zohy kely na lavaka anaty tany, toerana iray ahafahan'ny vatan-dehilahy iray miafina)”
Ankoatra ireo holatra, niangarana ihany koa ireo mpitsidika ireo nandritra ny diany.
« Nijanona naka sary izahay raha nandraoka voninkazo an'ala kosa ny rahalahiko AbuTAla, mba hotanehina. Avy eo notohizanay hatrany Wadi Ash Shawiki ary nandry alina teo amoron-drano. Naroso manodidina ny afon-dasy ny sakafo tamin'ny 21h30. Nifoha talohan'ny mangirandratsy izahay ary nikarakara ny sakafo maraina (kafe arabo sy voankazo daty). Nikarakara ireo voninkazo noraofiny hatao tenika i Abu Tala.», hoy ilay bilaogera.
Aorian'i Arabia Saodita, aty Bahrain indray isika izao, izay ambaboan'i Rants [Ang], bilaogera Bahraini, antsika amin'ny fotoanany taminà namana iray hafahafa  tao amin'ny biraony.
« Indraindray aho malahelohelo… rehefa sendran'izay, mahita ity bandy ity mipetraka eo amin'ny arofanin'ny varavarankelin'ny biraoko aho, aty am-piasàna. Tonga avy any izy, mijery ahy toa manontany hoe « Ahoana, ao tsara ? Toa tsy ao tsara ianao izany, mila miova rivotra ». Voromaherin'i Barbaria izy io, karazan'ny voromahery mpifindra monina, izay hitantsika misidina aty Bahrain rehefa tsara ny andro. Tsy ampy hohom-boromahery iray izy. Rex no iantsoako azy. Raha mbola tsy tsikaritrareo, lasibika sangany i Rex ».
Tsy ratsy, indrindra raha atao an-tsaina fa tsy maintsy miharitra ity jery  ity ireo bilaogera hafa raha mijery ny varavarankeliny, isanandro.
Efa miresaka biby ihany isika, ndao hijanona kely ao Ejipta izay hitantaran'ny bilaogera Maryanne Stroub Gabbani[Ang] ny fiainany any amin'ny toeram-piompiana .
“Ny alin'ny 8 martsa, tonga nanambara vaovao mampalahelo taminay ny iray tamin'ireo ankizilahin'ny mpiray vodirindrina. Maty androany alina ilay soavaly rain-janak'i Diva, tamin'ny fotoana indrindra izay nandehanan'ny iray tamin'ireo akizilahiko nitsirika ireo soavalinay. Nahazo antso saika tsy fantatra avy aminy ao, izay nahatakarako fa vao avy niteraka tao amin'ny iray amin'ireo fitoeran-tsoavaly i Diva» hoy izy, nanoratra.
« Nohamariniko tsara hoe nihidy tao amin'ny zaridainan'ny trano ireo alika, mba tsy hampitahorany ilay renin-tsoavaly. Nihazakazaka niaraka tamin'ny jiro aho. Tao amin'ny saha afovoany miaraka amin'ny zanany hotsaka i Diva. Nentinay ilay zana-tsoavaly ary naterinay tany amin'ny fitoerany ilay renin-tsoavaly, tany amin'ny faran'ny laharana, izay nisy mololo maina sy madio niandry azy. Napetrakay teo amin'ilay mololo ny zana-tsoavaly ary nijery an'i Diva izahay raha nanadio an'ilay zavaboary kely izy. Nokosokosehinay tamin'ny mololo kosa izy mba hanairana azy ary niezaka nitsangana izy avy eo. Tsy moramora ny mandamina tongotra efatra lehibe ambanina vatana kely».
Mba hanasarahana ny tontolon'ny biby sy ny an'ny olombelona, mijanona ao Jordania isika, izay namoahan'i SamirR[Ang] sarin'ireo tara-masoandro  miezaka mamaky rahona matevina.
Avy ao Jordania kosa dia mankao Dubai, izay amborahan'i AdBlog Arabia [En] amintsika ny fomba ahatongavan'ireo pizza mbola mafana aty amintsika  [sary]! Tena tsy ratsy ilay hevitra!
Raha mankafy ireo pizza vao avy nivoaka ny lafaoro ny mponin'i Dubai, manala voly antsika kosa i Mazen Krbaj[Ang], bilaogera libaney, miaraka amin'ireo sary nataony avondrony ao amin'ny bilaoginy .
Ao amin'ny Angry Arab News Service [ang] isika no hijanona farany, izay hanoloran'i As’as Abu Khalil, bilaogera libaney, an'ity sary mahatsikaiky ity , nalaina tao Ejipta.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/12/20/110617/
 ireto sary ireto: http://saudicacher.blogspot.com/2007/03/al-tenhat-and-wadi-ash-shawki.html
 namana iray hafahafa: http://bahrainirants.blogspot.com/2007/03/rex-barbary-falcon.html
 ity jery: http://sillybahrainigirl.blogspot.com/2007/03/when-sky-takes-shit.html
 ny fiainany any amin'ny toeram-piompiana: http://miloflamingo.blogspot.com/2007/03/new-arrivals.html
 sarin'ireo tara-masoandro: http://echo4224.blogspot.com/2007/03/picture-cloud-break.html
 ny fomba ahatongavan'ireo pizza mbola mafana aty amintsika: http://www.adblogarabia.com/?p=555
 ao amin'ny bilaoginy: http://mazenkerblog.blogspot.com/
 sary mahatsikaiky ity: http://angryarab.blogspot.com/2007/03/isa-sent-me-this-from-egypt.html